Monthly Bonus ကို Garnier Essence ဘူး 120 ကျော် ရောင်းချခဲ့တဲ့ Agent ကတော့ Poe Zar Thin (FB000486) Mon Mon Thwe (FB000112) Khin Khat Khat Khing (FB006431) Shwe Yee Win Shwe (FB000178) May Win (FB002185) May Myat Thu (FB000819) Zun Pwint (FB000643) Kyaing Kyaing Si (FB000086) May Thet Cho (FB001671) Shoon Lae Soe (FB000836) Khaing Zin Mon (FB000722) Cho Cho Lwin (FB004564) Khat Khat Nwe (FB002657) Su Mon Mon Zaw (FB000007) Yee Yee Win (FB002948) တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ???Congratulation ပါ Rising Agent တို့ !!! June လအတွင်း Garnier Essence ဘူး 120 ကျော်ရောင်းချပေးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် ? Rising Agent ? အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အောက်ပါ Bonus များကို ချီးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ?Bonus ????ငွေသား (3)သောင်းကျပ်တိတိနှင့် ???? Garnier Essence ဘူး (5) ဘူး နောက်ထပ် ဘယ်လို ?Super Agent? တွေ ထွက်ပေါ်လာဦးမယ်ဆိုတာကို စောင့်မျှော်အားပေးရအောင်နော်။
Monthly Bonus ကို Garnier Essence ဘူး 120 ကျော် ရောင်းချခဲ့တဲ့ Agent ကတော့ Tin Moe Thu (FB000101) Theingi Htun (FB001117) Ei Ei Mon (FB000923) Yin Myat Hlaing (FB001040) Thet Thet Aung (FB004574) Khin Nyein Nyein Aye (FB000602) Point Thae Mon (FB000498) Aye Aye Hset (FB000414) Yin Min Thaw (FB004120) Ma Thaint (FB000149) Su Latt (FB000594) L Mar Kyaw Win (FB004046) Nant Mya Khwar Nyo (FB001445) Zin Min Htike (FB001446) Soe Soe Kyi (FB001293) တို့ဖြစ်ပါတယ်။ ???Congratulation ပါ Khin Lay Zaw !!! June လအတွင်း Garnier Essence ဘူး 120 ကျော်ရောင်းချပေးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် ? Rising Agent ? အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အောက်ပါ Bonus များကို ချီးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ?Bonus ????ငွေသား (3)သောင်းကျပ်တိတိနှင့် ???? Garnier Essence ဘူး (5) ဘူး နောက်ထပ် ဘယ်လို ?Super Agent? တွေ ထွက်ပေါ်လာဦးမယ်ဆိုတာကို စောင့်မျှော်အားပေးရအောင်နော်။ #FocusBeauty #RisingAgent
Monthly Bonus ကို Garnier Essence ဘူး 156 ကျော် ရောင်းချခဲ့တဲ့ Agent ကတော့ Wai Kyipyar Zaw (FB002603) ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ???Congratulation ပါ Wai Kyipyar Zaw !!! June လအတွင်း Garnier Essence ဘူး 156 ကျော်ရောင်းချပေးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် ? Rising Agent ? အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အောက်ပါ Bonus များကို ချီးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ?Bonus ????ငွေသား (3)သောင်းကျပ်တိတိနှင့် ???? Garnier Essence ဘူး (5) ဘူး နောက်ထပ် ဘယ်လို ?Super Agent? တွေ ထွက်ပေါ်လာဦးမယ်ဆိုတာကို စောင့်မျှော်အားပေးရအောင်နော်။
Monthly Bonus ကို Garnier Essence ဘူး 180 ကျော် ရောင်းချခဲ့တဲ့ Agent ကတော့ Khin Lay Zaw (FB000622) ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ???Congratulation ပါ Khin Lay Zaw !!! June လအတွင်း Garnier Essence ဘူး 180 ကျော်ရောင်းချပေးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် ? Rising Agent ? အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အောက်ပါ Bonus များကို ချီးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ?Bonus ????ငွေသား (3)သောင်းကျပ်တိတိနှင့် ???? Garnier Essence ဘူး (5) ဘူး နောက်ထပ် ဘယ်လို ?Super Agent? တွေ ထွက်ပေါ်လာဦးမယ်ဆိုတာကို စောင့်မျှော်အားပေးရအောင်နော်။